Wechina uye yokupedzisira nharaunda pandinofanira kutarisira vatsvakurudzi kutamburira ari tichisarudza mukutarisana chokwadi. Ndiko, pashure zvose Uzivi uye BALANCInG, kutsvakurudza nezvetsika kunosanganisira kuita zvisarudzo pamusoro zvokuita uye zvatisingafaniri kuita. Zvinosuruvarisa zvisarudzo izvi kakawanda zvinofanira kuitwa yakavakirwa kukwana mashoko. Somuenzaniso, apo afunge encore, vatsvakurudzi kuti kuda kuziva mukana kuti achaita munhu kushanyirwa nemapurisa. Kana, kana mazano Emotional Contagion vatsvakurudzi kuti dai kuziva mukana kuti aigona chirwise mwoyo dzimwe vechikamu. zvichida fungidziro izvi yakaderera zvikuru, asi havambozivikanwi kutsvakurudza usati kunoitika. Uye, nekuti kana chirongwa paruzhinji yakawana mashoko pamusoro rwakashata zviitiko, fungidziro izvi chisingatarisirwi kuzivikanwa kunyange pashure pakuvaka apera.
Nechokwadi zviri handivo munzanga akatsvakurudza digitaalinen zera. The Belmont Report, paanotsanangura hurongwa tinyatsonzwisisa njodzi uye zvinobatsira, zvakajeka anobvuma izvi zvichava zvakaoma uwandu chaizvo. Zvisinei, chokwadi izvi, zvakawanda yakanyanya digitaalinen zera, muchidimbu nokuti tine zvishoma ruzivo, uye muchidimbu nokuda hunhu digitaalinen zera munzanga tsvakurudzo.
Kupiwa nechokwadi ava vamwe vanhu sokuti dzichitsigira nokuda zvakada "nani ngozi pane urombo," inova kwezuva nezuva shanduro matanho Principle. Nepo nzira iyi sokuti anonzwisisa-zvichida kunyange vakachenjera-zvinogona chaizvoizvo kukuvadza; zviri chilling nokutsvakurudza; uye anoita vanhu vanofunga nenzira isiyo (Sunstein 2005) . Kuti tinzwisise matambudziko pamwechete matanho Principle, ngatikurukurei Emotional Contagion. Kuedza akanga aronga kunosanganisira vanenge 700,000 vanhu, uye zvechokwadi kwakanga vamwe mukana kuti vanhu vari kuedza aizotambudzika kumukuvadza. Asi, paivawo nevamwe mukana kuedza aigona zvinovigira ruzivo kuti zvaizova zvinobatsira Facebook vanoshandisa uye nzanga. Nokudaro, apo kubvumira kuedza ndiwo mukana (sezvo yave nezvakakwana kukurukurwa) kutadzisa kuedza inewo mukana nokuti kuedza angadai yakabereka ruzivo inokosha. Zvechokwadi, chisarudzo haasi pakati kuita kuedza sezvo chakaitika uye kwete kuita kuedza; pane zvakawanda zvinogoneka okunatsiridza kune akagadzira kuti kunge vakaiisa imwe yetsika yakasiyana pachiyero. Zvisinei, pane imwe nguva, vatsvakurudzi achava nechisarudzo kuita kudzidza uye kwete kuita chidzidzo, uye kune ngozi zvose chiito uye kungopeta maoko. Hazvina kukodzera kuti pfungwa chete pane ngozi chiito. Zvikuru nyore, hapana mukana-isina kusvika.
Kufambira mhiri matanho Principle, imwe nzira inokosha kufunga pamusoro zvisarudzo kupiwa chokwadi ndiko shoma ngozi mureza. The shoma ngozi mureza kuedza chiero mukana imwe kudzidza pamusoro nengozi kuti vatori namaoko muupenyu hwavo hwezuva nezuva, zvakadai vachiridza zvemitambo uye kutyaira motokari (Wendler et al. 2005) . Izvi zvinokosha nokuti dzinoongorora kana chimwe chinhu zvishoma ngozi kuri nyore pane dzinoongorora chaiko azvipire ngozi. Somuenzaniso, muna Emotional Contagion, kutsvakurudza asati atanga, vaongorori angadai akaenzanisa mupfungwa kugutsikana pamusoro sezvingatarisirwa kuitika News Anopa kuti mupfungwa kugutsikana kuti vatori vechikamu vangada kuona kuedza (Meyer 2015) . Kana News Feeds pasi kurapwa vakanga yakafanana neiya sezvingatarisirwa kuitika pamusoro Facebook, ipapo vaongorori aigona kugumisa kuti kuedza zviri zvishoma ngozi. Uye, vaigona kuita chisarudzo ichi kunyange havazivi zvachose azvipire ngozi. Zvakafanana matauriro aigona ingashandiswa encore. Pakutanga, encore akaparirwa zvikumbiro kuna Websites zvaizivikanwa kuti vasanonoka, dzakadai Websites akarambidzwa mapoka enyika munyika utongi hurumende. Zvazvakadaro, zvakanga zvisina shoma ngozi vechikamu kwemamwe nyika. Zvisinei, rakagadziridzwa shanduro encore-izvo chete akaparirwa zvikumbiro kuna Twitter, Facebook, uye YouTube-ndiko chikumbiro shoma nokuti zvikumbiro kuna nzvimbo idzodzo kunokonzerwa panguva dzose padandemutande Browsing (Narayanan and Zevenbergen 2015) .
A inokosha Pfungwa yechipiri apo zvisarudzo pamusoro vanodzidza asingazivikanwi ngozi isimba Paakaongorora runovabvumira vatsvakurudzi kuverenga rakakodzera kukura kwavo pakudzidza (Cohen 1988) . Ndiko, kana kudzidza kwako kuti pachena vatori pangozi-kunyange zvishoma ngozi-ipapo nheyo Beneficence kunoratidza kuti unoda kumanikidza zviduku uwandu panjodzi vaifanira kuzadzisa pakutsvakurudza zvinangwa zvako. (Ngatidzokerei Deredzai nhungamiro Ini muChitsauko 4.) Kunyange zvazvo vamwe vaongorori vane Kunyanya kuita zvidzidzo zvavo sezvo guru sezvinobvira, tsvakurudzo nezvetsika kunoratidza kuti tinofanira kuita zvidzidzo zvedu sezvo diki sezvinobvira. Saka, kunyange kana usingazivi chaiyo pamwero njodzi uchidzidza kunosanganisira, simba kuongorora kunogona kukubatsira nechokwadi kuti sezvo diki sezvinobvira. Power kuongorora haisi itsva, Chokwadi, asi pane musiyano unokosha pakati sei zvinofanira kushandiswa nhasi nzira kuti raishandiswa analoginen zera uye. Munguva analoginen zera, vanotsvakurudza kazhinji akaita simba kuongorora nechokwadi chokuti kudzidza kwavo haana diki (kureva, pasi-Powered). Zvino, zvisinei, vatsvakurudzi vanofanira kuita simba kuongorora kuti nechokwadi chokuti kudzidza kwavo hakusi yakakurisa (kureva, pamusoro-Powered). Kana ukaita chinhu simba kuongorora uye kudzidza kwako sokuti inoda wakakura nhamba yevanhu, ipapo kuti chingava chiratidzo chokuti mugumisiro uri kudzidza chidukuduku. Kana zvakadaro, unofanira kubvunza kana ichi chiduku nezvinozoitika zvakakwana kukosha kuisa vakawanda vanhu ngozi isingazivikanwi kukura. Mumamiriro ezvinhu mazhinji mhinduro zvichida hapana (Prentice and Miller 1992) .
The shoma pangozi mureza uye simba kuongorora kungakubatsira kufunga zvidzidzo pamusoro uye magadzirirwo, asi havana kukupa ruzivo chero chitsva sei vatori vanganzwa pamusoro kudzidza kwako uye chii njodzi ivo angatambura kubva kuitawo pakudzidza kwako. Imwe nzira kukurira chokwadi ndiko kuunganidza mashoko okuwedzera, zvinoita kuti chemufungo-Mhinduro kuongorora uye kufanorongwa miedzo.
Zvichitevera mumwe mubvunzo, vakabvunzwa inopiwa nzvimbo umo vanogona kutsanangura mhinduro yavo. Pakupedzisira, vakabvunzwa-vaigona kuva zvinogona vechikamu kana vanhu basa kubva Micro-basa mumisika basa (semuenzaniso, Amazon Mechanical Zimbabwe Turk) -answer mimwe wevanotungamirira mibvunzo inokosha (Schechter and Bravo-Lillo 2014) .
Yetsika-Mhinduro kuongorora vane zvinhu zviviri kuti ndinowana zvikuru anoyevedza. Chokutanga, zvinongoitikawo pamberi kudzidza yave inoitwa, uye naizvozvo anogona kudzivisa matambudziko pamberi pakutsvakurudza kunotangira (vachiramba nzira kuti akuteerere nokuda nenjodzi). Chechipiri, yetsika-norudaviro kuongorora vakwanise vatsvakurudzi kuti vavatore shanduro akawanda ane tsvakurudzo chirongwa kuti dzinoona kuti vanhu vaida vakanzwisisa chemufungo nengaidzo shanduro dzakasiyana-siyana chete chirongwa. Zvisinei, mumwe kukamurwa, pamusoro penyaya-akapindura ongororo ndechokuti hazvisi pachena sei kuti kusarudza pakati akasiyana tsvakurudzo mazano akapiwa ongororo zvabuda. Muzviitiko zvokuora nechokwadi mhando iyi mashoko angabatsira zvisarudzo muperekedzi vaongorori '; chokwadi, Schechter and Bravo-Lillo (2014) Mushumo tisiye vakaronga kudzidza pakupindura nezvokunetseka vakarerwa vechikamu nenzira chemufungo-Achipindura ongororo.
Nepo chemufungo-mhinduro kuongorora zvinogona kubatsira kuti dzinoongorora anwa aronga pakutsvakurudza, havagoni uyere mukana kana kwokuomerwa rwakashata zviitiko. Imwe nzira kuti vatsvakurudzi vezvoutano kukurira chokwadi muzviruva ine ngozi iri kufanorongwa nemiedzo, imwe nzira inogona kubatsira vamwe munzanga tsvakurudzo.
Kana kuedza kubudirira idzva zvinodhaka, vaongorori regai pakarepo kusvetuka kuti randomized kunotoda nomuedzo guru. Asi, vanomhanya mhando mbiri rokutanga kudzidza. Pakutanga, panzvimbo Pasika I kutongwa, vatsvakurudzi kunyanya nezvezvandaifanira yokuwana yakachengeteka dose, uye zvidzidzo izvi zvinosanganisira vashoma vanhu. Kamwe yakachengeteka dose zvinoonekwa, Pasika II miedzo kuongorora efficacy zvinodhaka, zviri kukwanisa kushanda kupfuura nyaya ezvinhu (Singal, Higgins, and Waljee 2014) . Chete pashure Pasika I uye II zvidzidzo uri mushonga akabvumira kuti kuongororwa zvikuru randomized kuzvidzora kutongwa. Nepo chaiyo maumbirwo kufanorongwa nemiedzo wakashandiswa kukura mishonga mitsva varege kuva vakakodzera wakanaka evanhu tsvakurudzo, kana atarisana chokwadi, vaongorori aigona kumhanya zvidzidzo madiki zvakajeka zvakagadzirirwa vachiongorora kuchengeteka uye efficacy. Somuenzaniso, pamwe encore, unogona kufungidzira vaongorori kutangira vechikamu munyika nokutonga-of-mutemo simba.
Pamwe chete izvi zvina nzira-iri shoma ngozi mureza, simba, pachisara chemufungo-mhinduro kuongorora, uye kufanorongwa nemiedzo-kunogona kukubatsira mberi mune nokuchenjera nzira, kunyange mukutarisana chokwadi. Kusava nechokwadi haafaniri kutungamirira kungopeta maoko.